ISICWANGCISO SESIFUNDO SESIXEKO → Ulwakhiwo lweDolophu ezincinci ☆ Metalco ☆ Bellitalia
UKUHLAZIYA IFOMU YESIXEKO
UKUHLAZIYA IFOMU YESIXEKO -bameli bodwa beenkampani zase-Italiya kwintengiso yasePoland
IMETALI • I-Bellitalia • ISIQINISEKISO SESIXEKO
Simema onke amaqela anomdla ukuba asebenzisane I studio zokuzoba i abayili, ngqo kuthi okanye nge Umbutho woYilo lweLizwesililungu elixhasayo.
Sikwakumema kwikomkhulu lethu elitsha elikwi I-Warsaw kwi-ul. I-Fort Służew 1b / 10 Kwimbali, ekhethekileyo Kwikhulu lesi-8.
Kulapha ukuba iintlanganiso neenkomfa zamaqabane ethu kunye nabaxumi kunye nokuthatha inxaxheba kwabaqulunqi bethu base-Itali kuya kulungelelaniswa.
I-Metalco Inkampani yase-Itali eyasekwa ngo-1984.
Inkampani ikwayeli qela I-Bellitalia i ISIQINISEKISO SESIXEKO.
Impumelelo yorhwebo lwe-METALCO sisiphumo sophando oluqhubekayo kunye namava kwicandelo lokuyila, intsebenzo kunye nabayili abaphambili kunye nabakhi bezakhiwo, kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji yakutshanje kunye nezixhobo.
Iimveliso zeMETALCO zibonakaliswa kwisitayile ngasinye kunye noyilo, zona, ezidityaniswa nomgangatho ofanelekileyo, zahlulahlula kwiimarike kwihlabathi liphela. Zonke iinkqubo zemveliso kunye nezobugcisa ziqhutywa ngokuhlonipha imigaqo-nkqubo yendalo kunye nokhuseleko lokusiNgqongileyo.
I-Bellitalia yinkampani yase-Italy, eyinxalenye yeqela le-METALCO, elasekwa ngo-1962.
Kuveliswa izinto zokwakha ezidolophini kuzo zonke iintlobo zekhonkrithi, PDM, HPC, UHPC, granite kunye nemarble aggregate, kunye nokushicilela nokushicilela I-ULTRATENSE CONCRETE.
Yisixhobo esiguqukayo sombala esikuvumela ukuba udale naluphi na uhlobo lwamandla aphezulu kunye nokuqina.
Idume ngokuqokelela kwayo okwahlukileyo iimbiza zeentyatyambo i iibhentshiizihlalo ezinemilinganiselo engaqhelekanga, enobunzima obungaphezu kweetoni ezi-3,5 kunye nembonakalo entle yegranite yendalo okanye imabhile.
Zithengiswa ngempumelelo kwihlabathi liphela njengeemveliso ezizodwa ngenxa yeenkqubo eziphambili zetekhnoloji kunye noyilo.
Uyilo lwesiXeko Inkampani yase-Italy ibandakanyiwe Iqela leMetalco ecaleni kweBELLITALIA.
Ixhasa ukuhanjiswa okubanzi kweenkampani ezimbini zoodade.
Yinkampani esencinci amaqokelelo ayo enziwa ngabaqulunqi abancinci, abanika imibono emitsha kwiiqoqo zabo, ukuba ngumphelelisi omkhulu kwiimveliso zabantu abadala, abanamava abasebenza kunye nabakwaMetalco.
Iimveliso zayo zifikeleleka ngakumbi ngelixa kugcinwa uyilo olukhulu, umgangatho kunye nokuqina.